January 23, 2022 – ဝင်းမေတ္တာ
ညနေ (၂၃၁) – မောဟစရိုက်ရှိသူတို့အတွက်ကျင့်နည်း အပိုင်း(၃)
January 23, 2022 February 19, 2022
ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၃၁) မဟာသမယသုတ်များ မောဟစရိုက်ရှိသူတို့အတွက်ကျင့်နည်း အပိုင်း(၃) (မဟာဗျူဟသုတ် ၊ သုတ္တနိပါတ်၊ ၄၁၈) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ ဘယ်အရာကို ဖြတ်လျှင် ချမ်းသာစွာ နေရပါသလဲ? ဘယ်အရာကို ဖြတ်လျှင် မစိုးရိမ်ရပါသလဲ? အဘယ်မည်သော တရားတစ်ခုကို ဖြတ်တောက်ခြင်းကို သူတော်ကောင်းတို့သည် နှစ်သက်ကြပါသလဲ? ဘာကြောင့်လဲ? နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ မဟာသမယသုတ်များ သင်တန်းနှင့် မှတ်စု
နံနက် (၁၈၆) – ဝိဇ္ဇာ (အသိဉာဏ်) မျိုးစေ့ နှင့် စရဏ (အကျင့်) မျိုးစေ့အကြောင်း
တရားလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်း (၁၈၆) နံနက် သီလခံယူ, ဘုရားဝတ်ပြု, အလုပ်ပေးတရား စိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အပိုင်း (၉) ကံအကျိုးပေး ထူးခြားဆန်းကြယ်ခြင်း ဝိဇ္ဇာ (အသိဉာဏ်) မျိုးစေ့ နှင့် စရဏ (အကျင့်) မျိုးစေ့အကြောင်း နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ စိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သင်တန်းနှင့် မှတ်စု